musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jorodhani Kuputsa Nhau » Wizz Air kuvhura nzira nhatu dzendege dzekuJorodhani
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hungary Kuputsa Nhau • Italy Kuputsa Nhau • Jorodhani Kuputsa Nhau • nhau • Press zvinoburitswa • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Idzi inyaya dzakanakisa dzeJorodhani Tourism Board, Gurukota rezveKushanya neAntique muAmman, nevose vane chekuita neyekufambisa neyekushanya indasitiri muJorodhani. Uyu zvakare mukana wakazonaka kune vanoita zororo uye vangangoita vashanyi vanobva kuHungary, Italy, Austria, neRomania kuronga zororo rinodhura kuHumambo hweJorodhani.
Wizz Air kuvhura nzira sere itsva kupinda muHumambo hwaJoridhani.
Gurukota rezveKushanya neZvinhu Zvekare, HE Nayef Hmeidi Al-Fayez, vakazivisa panguva yemusangano nevatori venhau wakaitwa neSvondo, Gumiguru 3, 2021, kugadziriswa kwechibvumirano chitsva pakati pehumambo nendege yepasi rose inodhura, Wizz Air, panguva iyo yendege inoronga kushandisa nzira sere itsva kupinda nekubva kuJorodhani.
Kuvhurwa kwechibvumirano kwakauya pamberi paManaging Director we Jorodhani Tourism Board, Dr. Abed AlRazzaq Arabiyat, mumiriri weWizz Air Group mumusangano wenhau, VaOwain Jones, naHE Eng. Nayef Ahmad Bakheet. Sachigaro weADC Bhodhi Mukuru weVakomisheni veESEZA Bhodhi kuAqaba Special Economic Zone Authority uye nevamiriri venhau.
Gurukota rezveKushanya neZvinhu Zvekare, Nayef Hmeidi Al-Fayez vakati panguva yemusangano nevatori venhau: vashanyi vanouya muUmambo munguva inotevera. ”
Al-Fayez akacherekedza kuti denda risati rasvika, ndege dzinodhura dzinouya nekubuda munyika dzakapa simba idzva kunzvimbo yekushanya yeJordani, izvo zvakaita kuti nyika ikwanise kusvetuka zvakanyanya, ichibvumira Humambo kuhwina kubheja kwaro muchikamu uye kutora mugove wayo wemusika unokwikwidza zvakanyanya mudunhu reMiddle East.
Managing Director weJordani Tourism Board, Dr. Abed Alrazzaq Arabiyat, vakasimbisa kukosha kwekutanga chibvumirano ichi nendege yekuEurope iri kukura nekukurumidza, Wizz Air.
Arabiyat yakawedzera kuti kubudirira uku kwakauya nekuda kwekuenderera mberi kwekuedza kwakaitwa mukati memakore mashoma apfuura, sezvo zviri kutarisirwa kuti Wizz Air mashandiro muHumambo achakanganisa chikamu chevashanyi uye nekuwedzerawo nhamba yevashanyi, vachiona kuti nendege ichatakura vashanyi vemarudzi akasiyana siyana eEuropean uye Middle East kupinda muHumambo.
Arabiyat yakapa tsananguro yakadzama panguva yemusangano pamusoro pekukosha kwechibvumirano ichi, zvichiratidza kuti chibvumirano ichi chinosanganisira kuvhurwa kwemakambani mazhinji ekushambadzira kuburikidza nemapuratifomu ese akasimba enhandare kusanganisira iyo webhusaiti kuwedzera kune akasiyana maSocial Media mapuratifomu, Arabiyat yakaratidzawo kuti nhamba inotarisirwa yevashanyi vanopinda muHumambo mukati megore rekutanga rekushanda ichave ingangoita 167,000 vashanyi.
Nezve kupinda kwechibvumirano, Arabiyat yakati kumhara kwekutanga kweWizz Air muhumambo kwakarongwa musi wa15 Zvita 2021.
Vachitaura kumusangano wevatori venhau Owain Jones Chief Supply Chain uye Legal Officer weWizz Air Group vakati: “Ndiri kufara kuzivisa kutanga kwemabasa edu muHumambo. Ndine chokwadi chekuti nhasi yaziviswa kubatana ichatsigira kukwira kweindasitiri yekushanya nekupa yakaderera mutengo uye nendege dzemhando yepamusoro dzevatakurwi.
“Kubhururuka michina yendege ichangoburwa yagara iri dombo repakona rebhizinesi reWIZZ, nemubatsiro wekushandisa mafuta mashoma uye ruzha rwakaderera kuunza mabhenefiti kune vatengi vedu uye nharaunda. Ndege yedu nyowani nyowani pamwe nematanho edu ekudzivirira anovimbisa mamiriro akanakisa ehutsanana kune vafambi pavanenge vachishanda pamwe nepasi pekutsika.
"Tinotarisira kugamuchira vatakurwi vari muchikepe nebasa guru uye kunyemwerera."
Arabiyat yakaratidza kuti nzvimbo sere dzakasiyana dzichavhurwa nendege yeWizzair, kusanganisira ina (yegore rose) nzira dzinopinda muAmman kuburikidza neQueen Alia International Airport (QAIA), ayo ari:
Vienna - Ositiriya
Pamusoro pemigwagwa mina yemwaka inoenda kuAqaba, kumhara kuKing Hussein International Airport (KHIA)
Nezve nzira yekubhuka yezvigaro zviri mungarava dzeWizz Air, Arabiyat yakawedzera kuti kubhuka kunogona kuitwa kuburikidza newebsite yekambani (wizzair.com) kana neapp.
Arabiyat yakati Ministry of Tourism neAntiquities uye Jordan Tourism Board chinangwa chikuru kushanda pachirongwa chakakosha chehurumende che2021-2023 icho chine chinangwa chekukwezva vashanyi kuburikidza nekutsigira nendege dzinodhura kuwedzera kuCharter ndege.
Arabiyat yakaratidzawo kuti chikamu ichi chakange chambodzikira nekuda kwezvirango zvakatemwa pakufamba nendege nekuda kwe COVID-19 Denda, izvo zvakakonzera kurasikirwa kweMamirioni emadhora nekuda kwekushayikwa kwevashanyi vanouya munyika, vachiona kuti Humambo kuenda padanho nyowani panguva iyo (JTB) iri kuda kuwedzera huwandu hwevashanyi vanopinda muHumambo, pamusoro pekuwedzera mwero wevashanyi husiku hwekugara uye marisiti ekushanya, vachitarisira kuzadzisa zvinangwa zvinodikanwa zvakamiswa nekudzorera huwandu hwakawanikwa pre-denda .
Arabiyat yakasimbisawo kuti Ministry neiyo Tourism Board vari kushanda mukugadzira, kusimudzira uye kushambadzira chigadzirwa cheJordanian chekushanya nenzira yakanaka.
About Wizz Mhepo
Wizz Air, ndege yekuEurope iri kudhura inomhanya kwazvo, inoshandisa ndege dze140 Airbus A320 neA321 ndege. Chikwata chevanozvipira vevashandi vezvemuchadenga vanopa basa repamusoro uye mitengo yakaderera kwazvo, zvichiita kuti Wizz Air ive sarudzo yakasarudzika yevatakuri mamirioni 10.2 mugore remari rinopera 31 Kurume 2021.
Wizz Air yakanyorwa paLondon Stock Exchange pasi pechikwekwe cheWIZZ. Kambani iyi ichangobva kunzi imwe yendege dzepamusoro gumi dzakachengeteka pasi rose neairlineratings.com, yepasi rese chengetedzo uye chigadzirwa chiyero agency, uye 2020 Ndege yeGore neATW, kukudzwa kunodokwairirwa nendege kana munhu anogona kugamuchira, uye yakanyanya Yakasimba kambani muindasitiri yendege muna 2021 neWorld Finance Magazine.